Dowladda Islaamiga: Dumar iyo carruur ay cidna rabin - BBC News Somali
Xerada qoxootiga ee al-Xawl oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka Suuriya waxaa ka jirta macaluul, gaajo, cudurro iyo su'aalo badan oo aan jawaab loo hayn. Waxaana xeradaasi ku jira kumannaan qoysaska kooxda isku magacaawday dowladda islaamiga (IS) waxaana dadka xeradaasi ku sugan laga mamnuucay wax weliba oo gargaar ah oo ay dad qoxooti ah oo ay u baahnaayeen.
Qaarkood waxay la kulmaan neceyb aad u weyn, "iyaga oo guul darro aad u badan iney la kulmeen sheeganaya" Qaar wey kuugu qeylinayaan qaarna waxay ku weydiisanayaan inaad ka saaciddo wadda ay xeradaasi kaga bixi karaan si ay dalalka ay ka yimaaddeen ay ugu noqdaan.
Waddamada reer galbeedkana carruurta ku dhimaneysa xeradaasi ee la sheegaya waxay ku sheegeen iney tahay been abuur.
Umu Usama oo ka soo jeeda Morocco-Belgium waxay sheegtay lixdi sano ee ay dalka Suuriya ku sugneyd iney wax badan u qabatay dumar iyo carruur Suuriyaan ah oo ay intooda badan ay ka mid yihiin qoysaska IS.
Gabadhan oo ah kalkaaliso caafimaad oo xirata niqaabka iyo gacma gashi madoow "waxay sheegtay iney iyada dooratay iney sidan u xirato, balse xilligi ay Belgium joogtay ay niqaab xiran jirin".
"Heerka fikirka xagjirnimada haweenka xeradaasi ku sugan wey ku kala duwan yihiin"
"Dumar badan oo xijaabka madowga ah xiran ayaa la toogtay, iyada oo ilma yar oo aad u gubtay wariyaha tuseysa hooyada ilmahanna wey dileen" iyada oo eeddaasi dusha ka saareyso xooggaga Mareykanka uu horkacayo ee ka dagaallamayey Suuriya.
Image caption Xerada Al-Howl ee ku taallo Suuriya
Umu Usama waxay sheegtay inaan loo baahneen in raalli gelin laga bixiyo weerarki ay IS ku qaadday dalka Belgium oo ay 32 qof ku dhinteen oo uu ku jirin ninki isqarxiyey. Waxayna aaminsan tahay inaan kooxda IS ee ay taageerto weerarka ay dalkeeda ku qaadeen in xataa jawaab laga bixiyo.
Laba toddobaad oo keli ah ayaa ka soo wareegtay deegaanka Baghouz oo ah deegaanka ugu dambeeyey ee ay gacanta ku haysay kooxda IS xilliga ay kala wareegeen xoogagga Kurdiyiinta.
Xoogagga Kurdiyiintana waxay fursad siiyeen carruurta iyo dumarka iyo dadka dhaawaca ah iney deegaankaasi ka baxaan inta ay weerarka ay ku qabsanayeen Baghouz ay soo qaadin. Diyaaradaha xoogagga isbahaysigana xilliga uu dagaalka socday waxay dad rayid ah ku dileen Mosul iyo Raqqa.
Dadka ku waxyeelloobay dagaalladaasi
Kooxda IS waxay qoysaskooda u isticmaalayeen iney wajiga hore ee goobaha dagaalka iska hormariyaan.
"Maalin keli ah waxaa dagaalladaasi lagu dilay 2.000 oo qof", wiil yar oo Ciraaqi oo dhimasha ka badbaaday wuxuu ii sheegay ayuu yiri wariyaha warbixintan soo diyaariyey "Kooxda IS iney gawaaridooda xagga dambe ay ku safeen waxay iska horumariyeen dumarka iyo carruurta, waana ogeyn in gawaarida dagaalka ee kooxda la bartilmaameedsanaya, waxaanna u sheegnay iney gawaarida naga fogeeyaan balse wey naga diideen kaddibna waxaa la qarxiyey gawaaridii".
Image caption Nuur al-Islaam
Nuur waxay ka mid tahay carruurta ay waxyeellada halkaasi ka soo gaartay. Waxayna dul taalla sariirta xaruun caafimad oo ku taalla xerada oo ay leedahay hay'adda bisha cas ee Adduunka. Gabdhan yar ee 6 jirka waxaa xabbad lagaga dhuftay madaxa waxaana madaxa ka soo garay dhaawac xooggan.
Waxaana xabbadda ku dhuftay dableey adeegsaneysay qoryaha meesha fog wax ka dila ee Sniper-ka loo yaqanno xilli uu dagaal ka socday Baghouz.
Dhaawacyada ugu badan ee ku sugan xerada al-Howl waa carruur. Hooyada dhashay Nuur waxay ka soo jeedda dalka Turkmenistan waxayna har iyo habeen ay dul fadhidaa sariirta ay gabadheeda saaran tahay, seygeeda oo ka tirsanaa dagaal yahannada IS waxaa lagu dilay dagaalka Baghouz.
Xaaladda Nuur oo ah mid aad u adag waxaa loo gudbiyey isbitaal ku yaallo Hassakeh.
Image caption Asma Maxammed
Balse Asma dhaawaca soo gaaray ayey la suuxsan tahay hadal iyo dhaqdhaqaaq midna malaha waxay iska dul taalla sariirta, qoyska Asma waxay ka mid yihiin qoysaska ku jabay dagaalka looga soo horjeeday kooxda isku magacaawday dowladda Islaamiga ee IS.
Carruur ay tiradooda gaareyso 169 ayaa dhintay tani iyo marka ay ka soo carareen magaalada Baghouz, carruurtaasi oo ah kuwa aan wax galabsanin. Sida oo kale waxaa jira carruur tira badan oo iyagana xanuunno iyo cudurra kala duduwan la ildaran. Waddamada reer galbeedkana dhibaatooyinka carruurtaasi haaysta indhaha ayey ka qabsadeen.
Xerada al-Howl waxaa sida oo kale ku jira tobaneeyo kun oo ka mid ah dumarka ay Is addoonsiga ku haysteen oo ka tirsan beesha Yazidi.
Haweeneydan ilma yar sidata waxay sheegtay iney keligeed ilmahan ay dhabta ku hayso dhashay, cid la joogtay oo ka umulisayna jirin, kalkaaliyeyaal caafimaadna aysan aragba.
Waxayna sheegtay iney ninkeeda oo ka tirsan kooxda IS ay weli jeceshahay ayna sugeyso inuu mar un isaga oo caafimaad qaba u yimaaddo.